ब्लग – Page4– Saurahaonline.com
आत्मविश्वास जगाउने ३ सूत्र २०७६, १८ जेष्ठ शनिबार
एजेन्सी, १८ जेठ । कुनै पनि कार्यमा महाहस्ती बन्न असफल नभई अगाडि बढ्न सकिन्न । उत्कृष्ट परिणाम प्राप्तिका लागि तपार्इँले ठक्कर अवश्य पनि खानुहुनेछ । आत्मविश्वासले मानिसमा जादुमय प्रभाव पार्न सक्छ । अध्ययनहरुका अनुसार आत्मविश्वास र सफलता तथा..
कतै तपाईं यस्तै समस्यामा त हुनुहुन्न ? २०७६, १३ जेष्ठ सोमबार
एजेन्सी- प्रेम, विवाह र सम्बन्ध एक अर्काका परिपूरक हुन् । विवाह भइसकेपछि सम्बन्धमा प्रेम अत्यावश्यक कुरा हो । प्रेम वास्तवमा दुई हृदयको मिलन हो । आफ्नो जोडीको चित्त नदुखोस्, कुनै शारीरिक वा मानसिक समस्या नपरुन्, कष्ट नहोस्, आफ्नो जे भएपनि उनको..
शेरेले उदितालाई उभिएको हेर्न नसकेपछि….. २०७६, ६ जेष्ठ सोमबार
शेर आफ्ना विद्यालयकी उदिता म्यामलाई सारै मन पराउँथ्यो । आफूले जस्तोसुकै गल्ती गरेपनि म्याडमका पक्षमा सँधै बोल्ने गर्दथ्यो । एक दिन उदिता म्याम कक्षामा रिसाउँदै आइन । अनि सबै विद्यार्थीलाई एक एक गाली गर्न थालिन । सँधै विद्यार्थीसँग राम्रो..
१५ हजार खर्चिएपछि… २०७६, ६ जेष्ठ सोमबार
आपसी विश्वासका आधारमा सम्बन्ध टिकेको हुन्छ । सम्बन्धमा दरार आउने अर्को विषय भनेको पैसा हो । पैसा कै कारण श्रीमान श्रीमतीबीच झगडा पनि हुने गर्दछ । भर्खरै विवाह भएको एक परिवारले खर्च विवरणलाई नियमित रुपमा लेखेर राख्ने गरेको थियो । ३..
रक्षाले चप्पल खोलेर हानेपछि जिक्री टाप ! २०७६, ६ जेष्ठ सोमबार
एक दिन रक्षासँग जिक्री अनावश्यक रुपमा जिस्कीरहेको थियो । रक्षा जिक्रीको कुराले दिक्क मानेर बसेकी थिई । उनीहरु दुईबीच के भयो त्यस्तो जसका कारण जिक्रि टाप कस्न बाध्य भए त ? जिक्री : रक्षा तिमीसँग पेन छ ? रक्षा : छैन जिक्री : पुनः नसुने जसरी, रक्षा..
प्रचण्ड–सीताको मायाप्रेम, ५० वर्षको सुख–दुःख २०७६, २६ बैशाख बिहीबार
गोकर्ण भट्ट मनिसको जीवन, कैयन उकाली ओरालीको सम्मिश्रण । संघर्ष, दुःख, कष्ट, सुख, हाँसो, रोदन– यसैको नाम हो जीवन हो । जीवनका यी कुइनेटोहरुमा सहयात्रा गर्नेको काँध पाइयो भने, आँट र भरोसा पाइयो भने जस्तोसुकै कठिनाई पनि सहज ढङ्गले पार गर्न..
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ (पूर्णपाठ) २०७६, २० बैशाख शुक्रबार
काठमाडौं, बैशाख २० । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदको दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्। नेपाल सरकार बैशाख २०७६ प्रतिनिधि..
नेता खत्तम, हामी जनता झन् खत्तम ! २०७४, १३ चैत्र मंगलवार
नवीन रायमाझी कहिले काहीँ सोच्छु यो संसारमा नेताहरूसँग दोहरो परिचय नहुने मान्छे म एउटा मात्र होला कि अरु पनि होलान्न् ? दोहरो परिचय नभएपछि कसैसँग आशक्ति र घृणा हुने नै भएन। उनीहरुको समर्थन वा विरोधमा घाँटी सुक्नेगरी कराउनुपर्ने कारण पनि..
सरकारका अलोकतान्त्रिक निर्णय २०७४, २३ माघ मंगलवार
७० वर्षदेखिको अराजकता, विकृति, विसंगति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसाथ देशका सर्वाधिक शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता प्रक्रियामा जाने घोषणा गरेर ऐतिहासिक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाई जनतामाझ गए । जनताले पनि वाम..
दूध बेच्ने युवती र एमाले भकुण्डो २०७४, १४ माघ आईतवार
शिव पौडेल “एकादेशमा एउटी युवती थिइन् । उनी गाउँबाट दुध खरिद गरेर बजारमा बेच्ने गर्दिथिन् । तर, उनको उष्ण महत्वकांक्षाले साना सपना देख्दैनथ्यो । एकदिन उनी घैंटो टाउकोमा राखेर दुध बेच्न उनी बजार निस्किइन् । महत्वकांक्षी सपनामा उनी अभ्यस्त थिइन्..